Waa Kuma Maxamuud Xaashi + Bulashadda Oo Marag Cad Ka Furtay Iyo Aabihi Oo Ka Mid Ahaan Jiray Ciidamadda Ingiriska [Xogo Daaha Laga Fayday]..
Monday 19th June 2017 07:57:10 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
Maxamuud Xaashi wuxu dhashay hillaadii 1964 kii Gobolka Togdheer, Aaabihii wuxuu ahaan jirey Ciidamaddi Ingiriiska, wuxuu u weynaa sida lasheegay laba bahood oo Xaashi Cabdi mid kamida, Wuxuu ka baxay dugsiga sarre ee Sh. Bashiir, Wuxuu ku biiray SNM markii xaaladda noloshu ku adkkaatay halkaas oo walaalkii Cali Xaashi ka mid ahaa saraakishii SNM. sida lasheego wuxuu ku noqday Dawladii Siyaad Barre, markuu xamili waayey duruuufihii dhibaatadii Jabhadnimo, dagaalkii 1988 ayuu dhoqoshey ka noqday xoghayaha dhaqaalaha
SNM ee aaga 1aad illaa xorayntii waddanka oo uu noqday Maayorkii ugu horeeyey ee Magaalada Burco, ka dibna shirkii Boorame ayuu ka mid noqday xil dhibaanadii hab beleedka lagu soo doortay. Maxamuud wuxuu ku shaqayn jirey siyaasadda Saleebaan Maxamuud Adaan, waxaanu ahaa afhayeen dhaliila Maamulkii Madaxweyne Cigaal. wuxuu ka mid noqday xisbiga Kulmiye, Doorashii ugu horeysey ee Madaxweynaha ayuu Mr. Xaashi ka tahriibay isga iyo Xaaskiisu jamhuuriyadda Soomaliland waxaanu Reerkisii ku furay MagaaladdaBerhminghamhalkaas oo ku qaadanayey Jobseekers allowance, waxaanu soo doogsin raacay Guushii Kulmiye ee 2010 isagaa doorashada 3 billood ka hor dalka ku soo laabtay. Wuxuu ku soo baxay golihii Wasiiradda khaasatan duulista hawada. Wax wax barasho ah oo uu ku bartay Britain majirto.
Waxaynu maxamuud ka baranay:-
Saddex astaamood oo Illaahay ku sheegay Dad munaafaqiinta ah (Dadka uurka aan illaahay Daacad u ga ahayn).
1- Waa Shakhsi layla Qiray inuu Beenta yaqaano oo aan lagu kala baydhin.
2-Waa Shakhsi Aan ballan lahayn dadkuna aanu u kala sooc nayn.
3-Waa Shakhsi aan aaminaad lahayn oo is rogrog badan isla markaana hantida ummada ku fushada danihiisa gaarka ah ( Eeg guriga uu ku jiro ee ku yaal shacabka waa guriga keliya ee leh STOP lamida tan Wasiiradaha, eeg gaadiidka uu iibiyey intii uu xilka hayey ee shakhsiyaad uu dano ku fushanayo u gaday waxaalagu qiyaasaa 110 Baabuur, iyo lacagaha uu bixiyey).
4-Waa Shakhsi aan aqoon Maamul lahayn isla markaana aqoon sida sharciga iyo nidaamka aysu waafajiyo waxay keentay jujuub iyo kalsooni darro shakhsiyadeed.
5- Waxaynu ka baranay inuu Maxamuud ka mid yahay hormuudka qarranimda qabyaalada ku burburiyey wuxuu shaqaaleeyey in kabadan 300 ah Beesha Biciide uu ka soo jeedo.
6-Waa shakhsi aan aqoon horumarka oo jecel xilkasta in loo magacaabo, wuxuu dagaal ugu jiraa oo hantida qarranka ku bixiyaa sidii kursiga Gudoomiyaha loogu wareejin lahaa KULMIYE isagoo Xirsi & Samaale ku haystey, Xilka maanta Wasiiraddani ha dhaafaan oo Odayada haloo daayo.
7- Maxamuud Waa shakhsiga isga oo aan lahayn aqoon dhaafsiisan Af iyo Gole ka toocsi, raba 2022 inuu Madaxweyne u noqdo Somaliland Waxaan xusuustay Saajinkii Layberia.
8- Wasiir Xaashi wuxuu ka mid yahay Wasiiradda mindida daabkeeda hayey ee keenay in aan sharcigu shaqayn, in xoolaha ummada la xalalaysto, dhulka laboobo, aqoonta maamul lala dagaalamo, si loogu danaysto hantida ummada nidaam maaliyadeedka iyo hantidhowrka la burburiyo.
9-Waa Bud dhigaha In Beelaha ama Deegaanada Somaliland H.Yonis, H.Awal, Arab, Ciise, Harti,Samoroon, HJeclo, Ciida galle, uu siyaasi dawlada u metella noqdo shakhsi isagu uu keensaday, wuxuu siyaasada u isticmaalaa illaaliye, agaasin, maamule, agaasime guud, maareeye IWM. waana ta keeentay in nidaamkii maamul burburo marka laga tago Booliiska iyo Milateriga oo ujeeddad keliya ee loo isticmaalaa ay tahay in lacagta lagu urursado.
10- Waa shakhsi aan daacad u ahayn, KULMIYE, Jamhuuriyada Soomaliland, Saaxiibadiis (malaha saxiibtinimo, dadnimo aqooneed).
11- Waa Shakhsi aan kalsooni lahayn, waa shalhsi musuqmaasuq iyo fawdo ku dhisan.. wuxuu halis ku yahay Qarankan.
Waxaynu odhan karnaa Waa Khaayimiintii ama Maafiyaddii Aragagixisada Boobka Qarranka Ee Xididada u siibay Distuurka, iyo Shuruucdii Qarrankani lahaa, Waa hogaankii xaqul qalinka iyo Murdisooyinka.. Waa Shakhsiga Cimraha tagga isagoo Guri xaraana iyo Cunto xaraana iyo Dhar xaraana gashan sanadkii 3 Jeer..
Dadku maah kii hee intay Daaf ka guuraan Daacuun u rogan jirey/
SHACBIGA JAMHUURIYADDA SOMALILAND WAXUU CAMBAARAYNAYAA ERGAY BASAASKA MR. KEATING, MIDAWGA AFRIKA, MIDAWGA YURUB, QARAMA
[Daawo Live] Haboon Yar Oo Weli Madaxweyne Muuse Biixi Geed Hoostiisii Ku Sugaysa Iyo Muuqaal Laga Soo Duubay Hadda
Ciidanka Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Sitay Hub Sharci Darro Ah Iyo Talaabo Laga Qaaday
[Daawo Live:-] Xaaladda Deegaankii Lagu Dagaalamay Ee Tuke-raq Iyo Muuqaalka Laga Soo Duubay Ka Dib Dagaalkii Kululaa
Beelaha Biciide Ee Xabad Joojin Ceel-afwayn Kaga Dhawaaqay Iyo Muuqaal Dhamaystiran Oo Laga Soo Duubay [Live]
[Akhriso] Khasaaraha Rasmiga Ah Ee Dagaalkii Shalay Ka Dhacay Tuke-raq [Ma Dhabaa In Sarkaal Sare Laga Qabtay Puntland?]